Dugsiga Iyada oo ay ku hareersan yihiin iskuulada sare ee deriska la ah, Iskuulka Toshin Satellite Satellite-ka ayaa ka faa'ideysanaya meesha ay ku taal istiraatiijiga ah dariiqyada mashquulka badan si ay u soo bandhigaan naqshad waxbarasho oo gaar ah. Ku habboonaanta daraasadaha adag iyo jawi deggan oo lagu madadaasho, naqshaddu waxay kor u qaaddaa dabiiciga dheddigga ee adeegsadaheeda waxayna soo bandhigtaa qaab beddelid kale oo ku saabsan fikradda aan caadiga ahayn ee "Kawaii" oo inta badan ay isticmaalaan Iskuullada. Qolalka qolofka iyo fasalada iskuulkan waxay qaatan qaab dhismeedka saqafka sare octagonal gabled sida lagu muujiyey buugga sawirka carruurta.
Rugta Caafimaadka Urology
Rugta Caafimaadka Urology Xarunta 'Panelarium' waa xarunta cusub ee rugta caafimaad ee Dr. Matsubara mid ka mid ah dhakhaatiirta qalliinka tirada yar ee la aqoonsan yahay inay ka shaqeeyaan qalliinka qalliinka robotic da. Naqshadeynta waxaa laga soo saaray adduunka dijitaalka ah. Nidaamyada labaalaha ah 0 iyo 1 waxay ku xirnaayeen bannaanka cad waxayna ku dhegan yihiin darbiyada ka soo baxa derbiyada iyo saqafka. Dabaqa hoose ayaa sidoo kale raacaya isla qaab naqshadeed. Guddiyada inkasta oo muuqaalkooda muuqaalka ah uu shaqeynayo, waxay noqdaan calaamadaha, kuraasta, tirinta, buugaagta buugta iyo xitaa xirmada albaabka, iyo ugu muhiimsan indha-indheeynta sugida ugu yaraan qarsoodiga bukaanka.
Dugsiga Rugta Caafimaadka Urology Makhaayadda Udon Iyo Dukaanku Farmashiyuhu Makhaayadda Shiinaha Makhaayadda Jasiiradda